Adeegga qulqulka muusikada Tidal waxaa laga yaabaa in maalmihiisa la tiriyo | Waxaan ka socdaa mac
Tan iyo markii la aasaasay, adeegga muusigga ee Tidal wuxuu mar walba ku faanaa inuu ahaado waa adeeg fidinta muusikada oo loogu talagalay iyo kuwa jecel muusikada. Qaar ka mid ah tirooyinka muusikada ee ka dambeeya Tidslmson Jay-Z, Madonna, Beyonce ...
In kasta oo ay tahay adeegga kaliya ee hadda bixiya tayo sare oo taranka iyada oo loo marayo adeeggeeda Hifi, taas oo kharashka ayaa ka laba jibbaaraya rukunka caadiga ah Sida Apple Music iyo Spotify, barxadani waxay sii waddaa inay adeegsato dadka laga tirada badan yahay ee adeegsadayaasha adeegga noocan ah.
Sidoo kale, inta badan dakhliga aad ka soo gasho diiwaangelinta, Waxaa loogu talagalay fanaaniinta, iyada oo ka tagaysa maalgelinta barxadda, sida Spotify ay ku sameyso inta badan dakhliga soo gala ka dib marka ay bixiso khidmadaha u dhigma shirkadaha muusikada ee leh xuquuqda.
Qaabkan shaqeynta waxay umuuqataa inay maareynayso soo afjarida lacagaha shirkada, iyo sida ay sheegayaan warbixino dhowr ah oo kashifay waqtiga lagu qiyaasay nolosha Tidal hadii ay ku sii socoto heerkaan. waxay noqon kartaa ugu badnaan lix bilood.
Si la yaab leh maahan, Tidal ayaa beeniyay warka, isagoo sheegay inay rajeynayaan inay bilaabaan inay kasbadaan faa'iidooyinka rubuca labaad ee sanadka soo socda. Waxay u muuqataa in inkasta oo xaqiiqda ah in shirkadda Sprint ay heshay 33% shirkadda bishii Janaayo ee la soo dhaafay 200 milyan oo doolar, maamulka shirkadu wuxuu ku sii jiraa gacanta aasaasayaasha, kuwaas oo sii wadaya inay muujiyaan marar badan iyo in haddana waxoodu aanu ganacsi ahayn.
Hadda, waxaan sugi karnaa oo keliya inaan aragno sida mustaqbalka barnaamijkan miyuusigga qulqulaya uu u muuqdo, kaasoo lagu eedeeyay 2016-kii been ka sheeg tirada macaamiisha in ay lahayd, oo sida laga soo xigtay ilo kala duwan tiradaasi ay ku dhowdahay 1,2 milyan halkii laga heli lahaa 3 milyan ee shirkaddu sheegatay xilligaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Adeegga qulqulka muusikada ee Tidal ayaa laga yaabaa in maalmo la tiriyo